Wiktionary:Dinika - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Ity no pejy hamtrahana hafatra ho an'ny mpikambana rehetra eto amin'i Wikibolana. Azonao apetraka amin'ny teny malagasy izy na amin'ny teny vahiny, dia hamaly eo izay afaka mamaly. Rehefa te-hanampy hafatra iray dia tsindrio fotsiny ilay soratra hoe "Hanampy lohahevitra" eo ambony.
Malagasy : Eto amin'ity pejy ity no hanaovana ireo fangatahana ny sata rôbô. Mihatra eto amin'ity wiki ity ny fitsipika mirafibika ny rôbô, ary manome alalana an'ireo rôbô global hiasa eto ary ireo fanekena karazana rôbô ho azy. Ny rôbô hafa dia mametraka hataka eo ambany, ary raha tsy misy manohitra ny fangatahanao dia hotanterahin'ny mpiambona ilay hatakao.
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Wiktionary:Dinika&oldid=28604764"
Dernière modification le 13 Novambra 2020, à 19:58
Voaova farany tamin'ny 13 Novambra 2020 amin'ny 19:58 ity pejy ity.